ငွေကြေးစနစ် ပြိုလဲခြင်း ၊ နေထိုင်မှုအခြေအနေများ ဆိုးရွားလာခြင်းကြောင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွား - Xinhua News Agency
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ထရီပိုလီမြို့ ရင်ပြင်၌ ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုအတွင်း ပါဝင်ကြသူများအား နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘေရွတ် ၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပြည်တွင်းငွေကြေးစနစ် ပြိုလဲခြင်း နှင့် နေထိုင်မှုအခြေအနေများ ပိုမိုဆိုးရွားခြင်းတို့ကို ဆန့်ကျင်သည်အနေဖြင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း National News Agency က ဖော်ပြခဲ့သည်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ထရီပိုလီမြို့၌ ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုအတွင်း ပြည်သူများက လမ်းပိတ်ဆို့ထားမှုအား နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ထရီပိုလီမြို့၌ ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုအတွင်း ကားဘီးတာယာများအား မီးရှို့နေသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဆန္ဒပြသူများသည် စွန့်ပစ်ကွန်တိန်နာများ ၊ ကားတာယာများအား မီးရှို့ခြင်းများနှင့်အတူ လက်ဘနွန်တောင်ကုန်း နှင့် မြို့တော်ဘေရွတ် ၊ ထရီပိုလီ ၊ ဆီဒုန် ၊ ဇလဲမြို့ရှိ လမ်းများအား ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး ပြည်သူများအား လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ခြင်း ၊ စာသင်ကျောင်းအချို့အား ပိတ်ပင်ရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဆန္ဒပြမှုများသည် ငွေလဲနှုန်း အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာလျှင် တရားဝင်နှုန်းထားဟောင်း လက်ဘနွန်ငွေကြေး ၁,၅၀၀ ပေါင် မှ ၂၅,၀၀၀ ပေါင် အထိ မြင့်တက်သွားခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းငွေကြေးစနစ် ပြိုလဲသွားရာမှ စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံသားများအား ဆန္ဒပြမှုများတွင် ပူးပေါင်းကြရန် တောင်းဆိုသည့် သတင်းစကားများအား လူမှုမီဒီယာပေါ်တွင် ယမန်နေ့က ဖြန့်ဝေအသိပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက် မြင့်တက်လာမည်ဟု မှန်းထားပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းမှာ လည်း ပျမ်းမျှ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ၏ ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ နိုင်ငံသမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံး ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်းအောက်တွင် ရုန်းကန်နေရကြောင်း သိရသည်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံသည် အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးနေသော စီးပွားရေးအား ကယ်ဆယ်ရန် ရန်ပုံငွေများတွင် ဒေါ်လာဘီလီယံများစွာ ဖြည့်ဆည်းရေး မျှော်လင့်ကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့်အတူ ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIRUT, Nov. 29 (Xinhua) — Protests broke out on Monday across Lebanon against the deteriorating living conditions and the collapse of the local currency, the National News Agency reported.
Protesters blocked roads in the capital Beirut, Tripoli, Sidon, Zahle and in Mount Lebanon with burning tires and waste containers, preventing citizens from reaching their workplaces and prompting some schools to shut their doors.
Activists and civil society members circulatedaday earlier messages on social media calling on citizens to join the protests.
Lebanon has been reeling under the worst financial crisis in its history with unemployment rate expected to rise above 40 percent in 2021 and poverty rate estimated at 78 percent by the United Nations.
The country has initiated talks with the International Monetary Fund in hopes of unlocking billions of dollars in funds to save its crippling economy. Enditem
Photo 1 – People take part inaprotest inasquare of Tripoli, northern Lebanon, on Nov. 29, 2021. Protests broke out on Monday across Lebanon against the deteriorating living conditions and the collapse of the local currency, the National News Agency reported. (Photo by Khaled/Xinhua)
Photo2– People blockaroad duringaprotest in Tripoli, northern Lebanon, on Nov. 29, 2021. Protests broke out on Monday across Lebanon against the deteriorating living conditions and the collapse of the local currency, the National News Agency reported. (Photo by Khaled/Xinhua)
Photo3– Burning tires are seen duringaprotest in Tripoli, northern Lebanon, on Nov. 29, 2021. Protests broke out on Monday across Lebanon against the deteriorating living conditions and the collapse of the local currency, the National News Agency reported. (Photo by Khaled/Xinhua)